Izipho ezi-7 eziphambili zeMagi ezinokuzisa kubatyali mali Ezezimali
Omnye unyaka, i-SSMM, aZazi eziThathu ziya kutyelela abatyali mali abancinci nabaphakathi ngoJanuwari 6. Kulo nyaka, kunanini na ngaphambili, amabango akho aya kuba maninzi ukwenzela ukuba ukonga kwakho kube yinzuzo ngakumbi kunonyaka ophelileyo. Apho isalathiso sokulingana kuzwelonke, i-Ibex 35, yehle nge-11%. Into umntu wonke afuna ukuyiphinda kuba ingangumqondiso kwimidla yabo sele belahlekelwe yimali eninzi kwiinyanga ezidlulileyo.
Njengomphumo wale meko, akusayi kubakho enye indlela ngaphandle kokuba aZazi eziThathu athobele uthotho lweminqweno esinayo kulo nyaka mtsha wezorhwebo. Ngaphandle kwabanye Ukuqwalaselwa kobugcisa kwii-indices zamazwe aphesheya. Kuya kuxhomekeka kubo ukuba ekupheleni kwalo nyaka ibhalansi yethu kwi-akhawunti yokonga iye ichume okanye incinci ukukhokelela kumgangatho wobomi obungcono ukusukela ngoku ukuya phambili. Ngamaqhinga aliqela esiza kukuchazela apha ngezantsi kwaye iiMagi zinokuthatha, ngaphandle kwemizamo yazo.
Indawo yokuqala iya kusekelwa ekunyukeni kwenzala eqhutywa ngendlela elawulwayo kwaye kude nayo nayiphi na into emothusayo enokubandakanya ilahleko kwipotifoliyo yakho. Ngale ndlela, umnqweno wokuba kufuneka usebenze ngokusesikweni kwileta yakho yasebukhosini kufuneka uyithathele ingqalelo le mnqweno unqwenelekayo kubo bonke abatyali zimali kwilizwe lethu. Akunzima kakhulu ukuba lo mnqweno uzalisekiswe kwiinyanga ezilishumi elinambini ezizayo ukusukela oko le njongo ye-European Central Bank (ECB), njengoko ibekiwe kwiingxelo zamva nje ngumongameli wayo, u-Mario Draghi.
1 Okwesibini kwezipho: ukuzola eNgilane
2 Isipho sesithathu: Ukulungiswa kweMfazwe yoRhwebo
3 Isipho sesine: izibonelelo zeshishini
4 Isipho sesihlanu: ukungabikho kwemfazwe
5 Isipho sesithandathu: thabatha i-uptrend
6 Isipho sesixhenxe: fumana isicwangciso ngokufanelekileyo
Okwesibini kwezipho: ukuzola eNgilane
Enye yezinto ezinokuthi zenzakalise abatyali zimali abancinci nabaphakathi yinkqubo entsonkothileyo kule ndawo yelizwekazi elidala kwaye evela Brexit. Ngale ndlela, akukho nto ilunge ngaphezu kweencoko phakathi kwamaqela omabini eziphuhliswayo phantsi kokukhusela umdla wazo. Into ebaluleke ngokupheleleyo kwiimarike zezabelo ukubuyela kwindlela yesiqhelo. Ewe, ukuphazamiseka kwendalo yezopolitiko ephantse ihlale ikhokelela ekwehleni kwimarike yemasheya. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye kwanakwindawo yokujonga izinto ezisisiseko.
Isipho sesithathu: Ukulungiswa kweMfazwe yoRhwebo
Alithandabuzeki elokuba imfazwe yorhwebo phakathi I-United States ne China ibisenzima kwiimarike zemali. Njengoko kwenzekile kwisemester yokugqibela yonyaka ophelileyo. Iindaba ezimnandi ngale ndlela kufuneka ziqokelelwe kunye nokunyuka kwiimarike zamasheya kwihlabathi liphela kwaye mhlawumbi ngamandla amakhulu. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba inokuthatha iimarike zentengiso kumanqanaba angabonwanga kwiinyanga ezilishumi elinambini ezidlulileyo kwaye inokuthathwa ngokunenzuzo kwezona zitokhwe zinoburharha eziza kuba zezona ziqhuba kakuhle kwiimarike zezabelo. Ngokunyuka okufanelekileyo kakhulu kuzo zonke iindawo zokujonga.
Isipho sesine: izibonelelo zeshishini
Iziphumo zekota zeenkampani ezidwelisiweyo ziya kuthatha isigqibo ekunikezeleni ukonyusa ngamandla amaxabiso abo. Ke ngoko, kuya kubaluleka ukuba inzuzo yeshishini inyuswe ukusuka ngoku ukuya phambili. Nokuba yenzelwe umda omncinci omncinci ngokubhekisele kwiminyaka edlulileyo. Le nto iya kuba yinto eyongezelelweyo yokuqhubela phambili ukukhula kwii-indices zentengiso ephambili emhlabeni. Kuba esiphelweni sosuku yintoni emalunga nokuba ngu ukukhula koqoqosho yigcine kuzo zonke iinkalo zobomi beshishini. Ayothusi into yokuba iya kubonakala kukunyuka kwexabiso lezabelo zayo.
Isipho sesihlanu: ukungabikho kwemfazwe
Alithandabuzeki elokuba iimfazwe ziyathengisa kwiimarike zezabelo njengoko kubonisiwe kwiminyaka yakutshanje. Ngale ndlela, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba iimeko zemfazwe zibonakaliswa kukungabikho kwabo. Apho enye yezona mpikiswano ziphikisayo kunye neziphumo ezibi kwizabelo zamashishini zezinto ezinokujongana neRussia neUkraine. Akumangalisi ukuba le micimbi ibenokubonisa ngokuthe ngqo ukuhla kwexabiso lezabelo. Enye yeendaba ezilungileyo ezinokuthi ziveliswe kulo nyaka mtsha wokurhweba kukuba ezi ziganeko azenzekanga phantsi kwazo naziphi na iimeko.
Isipho sesithandathu: thabatha i-uptrend
Ngayiphi na imeko, ezona ndaba zimnandi banokuthi abatyali mali abancinci nabaphakathi babe nazo ngeli xesha kukuba imarike yemasheya ngokubanzi, okanye ubuncinci amaxabiso athile, inokungena kwimixube ekwi-bullish. Ngokumalunga neyokuqala, inzima kakhulu ukuba inokwenziwa ngokusesikweni, kodwa ngokuchaseneyo, izindululo zesibini ngokuqinisekileyo ziya kubonakala kwiinyanga ezizayo. Kuba njengoko abatyali mali bahlala besithi namava ngakumbi Amathuba oshishino lokwenyani ahlala eveliswa kwiimarike zezabelo. Njengeendaba ezimnandi zokwenza ukonga kwakho kunenzuzo.
Isipho sesixhenxe: fumana isicwangciso ngokufanelekileyo
Kwaye njengesicwangciso sokugqibela sokuphucula ngempumelelo utyalo-mali kule khosi, izinto ezingapheliyo azinakulityalwa. Phakathi kwazo, enye yezona zinto zibalulekileyo kukuba awuzenzi iimpazamo ekuhambiseni ipotifoliyo yakho elandelayo yotyalo-mali. Ukuhlangabezana nale mfuno ibalulekileyo, awuzukukhetha ngaphandle kokuba Uqeqeshwe kakhulu Ngamaqhinga oza kuwathatha ukukhetha ezokhuseleko ezibhalwe kwiimarike zezabelo. Uhlalutyo olunzulu malunga nokuvela kweentengiso zamazwe aphesheya.
Njengoko sele ubonile, ke, azikho nzima iimfuno zokuhlangabezana nazo kwaye ukuba ziyafezekiswa uya kuba nebhaso lakho elifanelekileyo. Ngenzuzo onokuthi uphucule ngayo kwelinye iklasi leemveliso zemali. Ngamaqhinga amaninzi otyalo-mali kunye nobume obahlukeneyo, nanjengoko eyona njongo yakho ikhawulezileyo kulo nyaka kuba kusesiphelweni sosuku apho olu hlobo lwemisebenzi kwiimarike zezemali lubandakanyekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Izipho ezi-7 eziphambili zeMagi ezinokuzisa kubatyalomali